Banijya News | » अब चिया, कफी सँगै कप समेत खान मिल्ने ! अब चिया, कफी सँगै कप समेत खान मिल्ने ! – Banijya News
अन्तराष्ट्रिय रोचक प्रसँग
अब चिया, कफी सँगै कप समेत खान मिल्ने !
०२ पौष, २०७६, काठमाण्डौ । यदि हामीलाई चिया वा कफी पिउन मन लाग्यो भने काँच, प्लास्टिक वा कागजको कपमा चिया पिउने गर्छौ । यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो काँचको कप त धोएर पटक – पटक पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ तर प्लास्टिक र कागजको कप भने डस्टबिनमा फालिन्छ । त्यसरी फालिएका कपले वातावरणमा असर त गर्छ नै, कपहरु डिस्पोज हुन समेत सयौँ वर्ष लाग्ने गर्छ । युरोपियन मुलुक न्युजिल्यान्डमा नयाँ प्रयोग गर्न थालिएसँगै अब यो समस्याबाट भने पार पाउने आशा गरीएको छ ।
न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय वायुुसेवा कम्पनी एअर न्युजिल्यान्डले प्लास्टिक र कागजका कपबाट हुुने फोहोर कम गर्न चिया वा कफी सँगै खान मिल्ने कपको प्रयोग परीक्षण सुरु गरेको छ । कम्पनीले कपको परीक्षण जमिन र आकाश दुुवैमा गरेको जनाएको छ । उक्त कप भेनिला बिस्कुट फ्लेभरमा रहेको छ र यी कप चुहावट नहुने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
वर्षमा करिब ८० लाख कप खपत गर्ने गरेको एअर न्युजिल्यान्डले आफ्नो यो नवीन थालनीले कपबाट हुुने फोहोर कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने दाबी गरेको छ । र यसलाई वातावरण संरक्षणको अभियानको दरिलो कदमको रुपमा अगाडि सारेको जनाएको छ । (एजेन्सी)